Young Adult Matters (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Ahn Hee-yeon, Bang Eun-jung, Heo Joon-seok, Kim Kang-hyun, Lee Hwan, Lee You-mi, Shin Haet-bit
တောငျကိုရီးယားဒရမျမာတှေ၊ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ၊ တေးသီခငျြးတှနေဲ့ရငျးနှီးနတေဲ့ကြှနျမတို့က တောငျကိုရီးယားလူ့ပတျဝ◌နျးကငျြအပျေါဘယျလိုအမွငျရှိကွသလဲ? ကြှနျမတို့ထကျတိုးတကျမှုတှအေမြားကွီးရှိနတေဲ့နိုငျငံရဲ့လူမှုပတျဝ◌နျးကငျြကို အနညျးနဲ့အမြားတော့အထငျကွီးအကောငျးမွငျကွတာအမှနျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တောငျကိုရီးယားဒါရိုကျတာ Lee Hwan က Young Adult Matters ဆိုတဲ့ရုပျရှငျနဲ့ ယခုခတျေတောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့လူငယျတှကွေားကအဖွဈအပကျြတှကေို ပုံရိပျထငျအောငျတငျပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယှနျးဆယျဂငျြးဆိုတဲ့အထကျတနျးကြောငျးသူတဈယောကျဟာ ညီမဖွဈသူယှနျးဆယျယောငျးနဲ့နှဈယောကျတညျးနထေိုငျကွပါတယျ။ ယှနျးဆယျဂငျြးဟာတဈခါတဈရံမှာ သူ့ရဲ့လကျကိုဓားနဲ့လှီးတတျပွီး sociopath တဈယောကျရဲ့အပွုအမူတှရှေိ၍ မူးယဈဆေးလဲစှဲနတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာကြောငျးမှာလညျးအတနျးဖျောမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ LGBT relationship ရှိတဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဆယျဂငျြးရဲ့ LGBT ခဈြသူဟာဆယျဂငျြးကိုအခွားသူတှရှေမှေ့ာအနိုငျကငျြ့တတျပါတယျ။
Sociaopath တဈယောကျဖွဈဟနျရှိတဲ့ယှနျးဆယျဂငျြးဟာ သူတို့ကြောငျးကကြောငျးအုပျရဲ့သားနဲ့ကိုယျဝ◌နျရခဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးအုပျဟာကိုယျဝ◌နျဖကျြခဖြို့နဲ့ ဒီကိစ်စကိုဘယျသူ့ကိုမှမပွောဖို့ဆယျဂငျြးကိုစာခြုပျမှာလကျမှတျထိုးခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျဆယျဂငျြးရဲ့ LGBT ခဈြသူဟာလညျးထိုကိုယျဝ◌နျကိစ်စနဲ့ဆယျဂငျြးကိုအပွဈပွောရိုကျနှကျခဲ့ပွီး ထိုညမှာပဲသူဟာဆယျဂငျြးမကျြစိရှမှေ့ာ ကွောကျမကျဖှယျအဖွဈဆိုးနဲ့သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ ထိုအဖွဈတှကေိုတဈပွိုငျနကျတညျးရငျဆိုငျလိုကျရတဲ့ဆယျဂငျြးဟာ ကိုယျဝ◌နျဖကျြခဖြို့အကွောငျးပွခကျြနဲ့အိမျကနထှေကျပွေးခဲ့ပွီး လမျးမှာသူ့လိုပဲအသကျရှယျတူအိမျပွေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ဂြူယောငျးနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ ပိုမိုပွီးသူငယျခငျြးသံယောဇဥ◌ျနကျရှိုငျးလာခဲ့တဲ့ကောငျမလေးနှဈယောကျဟာ ဆယျဂငျြးရဲ့ကိုယျဝ◌နျကိုဖကျြခဖြို့နညျးလမျးပေါငျးစုံရှာကွပါတော့တဲ့အခါ… ဘကျပေါငျးစုံကနပေကျြစီးခငျြတိုငျးပကျြစီးနတေဲ့ဆယျဂငျြးနဲ့ဂြူယောငျး ဘယျလိုတှကွေုံတှရေ့မလဲ? သူတို့တှရေဲ့ခံစားခကျြတှေ၊ နောကျကှယျကအတိတျအကွောငျးပွခကျြတှကေဘာလဲ…?
ကြောငျးတှငျးအနိုငျကငျြ့မှု၊ လူငယျတှကေိုယျ့ကိုယျကိုအဆုံးစီရငျမှု ကမ်ဘာ့နံပါတျတဈဖွဈနတေဲ့တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ လူ့အသိုငျးအ၀◌ိုငျးကိုထငျဟပျအောငျရိုကျပွထားတဲ့ရုပျရှငျကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ၊ မူးယဈဆေးဝ◌ါးဆိုငျရာနဲ့ အခွားကွမျးတမျးသောစကားအသုံးအနှုနျး၊ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျမြားပါတာကွောငျ့အသကျမပွညျ့သေးသောကလေးမြားကွညျ့ရှုရနျမသငျ့တျောပါဘူး။
ဒီဇာတျကားအတှကျ အညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျပေးတာကတော့ Erika Sean ဖွဈပါတယျ။
တောင်ကိုရီးယားဒရမ်မာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ တေးသီချင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ကျွန်မတို့က တောင်ကိုရီးယားလူ့ပတ်ဝ◌န်းကျင်အပေါ်ဘယ်လိုအမြင်ရှိကြသလဲ? ကျွန်မတို့ထက်တိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့လူမှုပတ်ဝ◌န်းကျင်ကို အနည်းနဲ့အများတော့အထင်ကြီးအကောင်းမြင်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာ Lee Hwan က Young Adult Matters ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ယခုခေတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကြားကအဖြစ်အပျက်တွေကို ပုံရိပ်ထင်အောင်တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယွန်းဆယ်ဂျင်းဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ ညီမဖြစ်သူယွန်းဆယ်ယောင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ ယွန်းဆယ်ဂျင်းဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာ သူ့ရဲ့လက်ကိုဓားနဲ့လှီးတတ်ပြီး sociopath တစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေရှိ၍ မူးယစ်ဆေးလဲစွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကျောင်းမှာလည်းအတန်းဖော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ LGBT relationship ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ဂျင်းရဲ့ LGBT ချစ်သူဟာဆယ်ဂျင်းကိုအခြားသူတွေရှေ့မှာအနိုင်ကျင့်တတ်ပါတယ်။
Sociaopath တစ်ယောက်ဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့ယွန်းဆယ်ဂျင်းဟာ သူတို့ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ရဲ့သားနဲ့ကိုယ်ဝ◌န်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဟာကိုယ်ဝ◌န်ဖျက်ချဖို့နဲ့ ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဖို့ဆယ်ဂျင်းကိုစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဆယ်ဂျင်းရဲ့ LGBT ချစ်သူဟာလည်းထိုကိုယ်ဝ◌န်ကိစ္စနဲ့ဆယ်ဂျင်းကိုအပြစ်ပြောရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ထိုညမှာပဲသူဟာဆယ်ဂျင်းမျက်စိရှေ့မှာ ကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်တွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ဆယ်ဂျင်းဟာ ကိုယ်ဝ◌န်ဖျက်ချဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီး လမ်းမှာသူ့လိုပဲအသက်ရွယ်တူအိမ်ပြေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျူယောင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ပိုမိုပြီးသူငယ်ချင်းသံယောဇဥ◌်နက်ရှိုင်းလာခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ဟာ ဆယ်ဂျင်းရဲ့ကိုယ်ဝ◌န်ကိုဖျက်ချဖို့နည်းလမ်းပေါင်းစုံရှာကြပါတော့တဲ့အခါ… ဘက်ပေါင်းစုံကနေပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီးနေတဲ့ဆယ်ဂျင်းနဲ့ဂျူယောင်း ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရမလဲ? သူတို့တွေရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ နောက်ကွယ်ကအတိတ်အကြောင်းပြချက်တွေကဘာလဲ…?
ကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်မှု၊ လူငယ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှု ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀◌ိုင်းကိုထင်ဟပ်အောင်ရိုက်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မူးယစ်ဆေးဝ◌ါးဆိုင်ရာနဲ့ အခြားကြမ်းတမ်းသောစကားအသုံးအနှုန်း၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များပါတာကြောင့်အသက်မပြည့်သေးသောကလေးများကြည့်ရှုရန်မသင့်တော်ပါဘူး။
ဒီဇာတ်ကားအတွက် အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးတာကတော့ Erika Sean ဖြစ်ပါတယ်။
Ahn Hee-yeon Bang Eun-jung Heo Joon-seok Kim Kang-hyun Lee Hwan Lee You-mi Shin Haet-bit
Option 1 teracloud.jp 603 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 603 MB SD (480p)
Option3teracloud.jp 1.4 GB HD (1080p)
Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014) 2014